Mushaarka mudanayaasha baarlamaanka | Somaliska
In badan oo ka tirsan mudanayaasha cusub ee baarlamaanka Sweden ayaa waxaa soo galay lacag dheeri ah ayadoo khaarkood ay arday uun ahaayeen intaan la dooraan ka hor. Dadkaas waxaa ka mida wiil 18 jir oo baarlamaanka ka soo galay magaalada Stockholm. Mudanayaasha baarlamaanka Sweden ayaa qaata mushaar dhan 56,000Kr bishii. Marka loo barbar dhigo wadamo badan ayay mudanayaasha baarlamaanka Sweden qaataan mushaar ka yar dhigooda. Balse saas oo ay tahay ayaa dadka qaarkood qabaan in mushaarka laga yareeyo mudanayaasha baarlamaanka.
In badan oo ka tirsan mudanayaasha cusub ee baarlamaanka Sweden ayaa waxaa soo galay lacag dheeri ah ayadoo khaarkood ay arday uun ahaayeen intaan la dooraan ka hor. Dadkaas waxaa ka mida wiil 18 jir oo baarlamaanka ka soo galay magaalada Stockholm.
Mudanayaasha baarlamaanka Sweden ayaa qaata mushaar dhan 56,000Kr bishii. Marka loo barbar dhigo wadamo badan ayay mudanayaasha baarlamaanka Sweden qaataan mushaar ka yar dhigooda.
Balse saas oo ay tahay ayaa dadka qaarkood qabaan in mushaarka laga yareeyo mudanayaasha baarlamaanka.